Bit By Bit - Mass ngokubambisana - 5.6 Isiphetho
Ngokubambisana Mass kuzokwenza sikwazi abacwaningi ukuxazulula izinkinga zesayensi ezazingaphansi engenakwenzeka ukuxazulula ngaphambili.
I age digital kwenza ukusebenzisana mass ucwaningo lwesayensi. Kunokuba nje ubambisene inamba encane ozakwabo noma abasizi ucwaningo, njengoba esikhathini esidlule, singakwazi manje sebenzisana wonke umuntu emhlabeni uxhumano Inthanethi. Njengoba izibonelo kulesi sahluko show, la letisha ngokubambisana mass uye wakusiza kakade ososayensi ukuthuthuka ngempela ngezinto ezibalulekile. Ukusebenza kwalezi amasu e-social sciences liqhubeka lingumuntu umbuzo evulekile, kodwa mina am okuhle ngendlela engakholeki.
Ngokwezinhloso zalo ucwaningo social, ngicabanga kuyasiza ukuba bahlukanise mass ukusebenzisana amaphrojekthi ngezigaba ezintathu:
In kathisha amaphrojekthi womuntu, abacwaningi ukuhlanganisa imizamo abantu abaningi abasebenza on ezilula micro-imisebenzi ukuze baxazulule izinkinga ukuthi ziphakeme ngendlela engafinyeleleki elikhulu ngomuntu.
In call evulekile amaphrojekthi, abacwaningi iyinkinga nge lula ukuhlola solution, uhlale ucela izixazululo kubantu abaningi, bese sithathe best.
In basakaza iqoqo idatha amaphrojekthi, abacwaningi nika amandla ababambiqhaza ukuba nesandla izilinganiso ezintsha kwezwe.
Ngaphezu nokuthuthukisa ucwaningo social, mass ukubambisana amaphrojekthi futhi babe kwezombuso engahle. Lezi zinhlelo lusabalale kokubili abangakwazi ukuhlela nemisebenzi emikhulu ngezinga futhi ngubani kungaba nomthelela kubo. Njengoba nje Wikipedia sashintsha ukuthi sicabangani kwakunokwenzeka, ikusasa mass ukubambisana amaphrojekthi zizoshintsha lokho esicabanga kungenzeka ucwaningo lwesayensi.